Ungamfowunela njani umntu osebenzisa imali mboleko yakhe? | Ulwazi oluluncedo lomntu wonke.
Ungamfowunela njani umntu osebenzisa imali mboleko yakhe?
Inkxaso yabathengi qu; Ungatsalela umnxeba kwinombolo engahlawulelwayo 8-800-333-45-16, umnxeba wababhalisile eRussia asimahla. Umqhubi uya kuphendula imibuzo yakho kwaye uya kukucebisa ngemveliso yasebhankini.
Akusoloko kunokwenzeka ukuba undwendwele isebe lebhanki. Ngamanye amaxesha kulula ukubiza umnxeba ophetheyo kwaye ufumane inani lemali mboleko yakho okanye ukusombulula nayiphi na imicimbi yemali. Ikhredithi yebhanki yasekhaya ine-hotline kunye nenombolo engahlawulelwayo 8 800 333 45 16 kunye nolwandiso 452.
Ukutsala umnxeba kwibhanki yemali mboleko yekhaya kufuneka ulandele ikhonkco lam kwaye ukhethe eyona ilungele wena. Ibhanki nganye inomdla ekutsaleni abathengi, ke, ibonelela abathengi malunga nokubonisana ngemicimbi eyahlukeneyo.
Nantsi ifowuni, igcinwe ngengozi .. Le yile ofisi yesentloko 8-965-11-99-891.
Ingxaki kukuba kuphela iinombolo zomnxeba zaseMoscow ziyafumaneka kwiwebhusayithi yebhanki (495-785-8222), okuthetha ukuba kubo bonke abanye abathengi abahlala ngaphandle komzi, incoko kunye nomqhubi ngalo naluphi na umba iya kuhlawulwa.
Emva kwenkxwaleko ka-2014, iibhanki ezininzi, kubandakanya i-Homecredit, zenqaba iifowuni ezisimahla ezingama-8-800, ezizise ukungalunganga kubathengi. Endaweni yoko, baqala ukubonelela ngenkonzo yokubonisana nge-Intanethi, ekungekho ndlela inokusebenza endaweni yoko kunxibelelwano oluphilayo.
Ngokwam, ndiyifumene le ndlela yokuphuma: Ndibuze yonke imibuzo kwi-bhanki ngqo kwi-LC: ngale ndlela ndonga ixesha kwaye ndifumana impendulo efanelekileyo.
Imibuzo ye-21 kwiziko ledatha eliveliswe kwimizuzwana ye-0,550.